भन्सार बढ्यो, भ्याट घट्यो - Karobar National Economic Daily
भन्सार बढ्यो, भ्याट घट्यो
query_builderMarch 1, 2017 9:45 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility341
काठमाडौंः सरकारी खर्चको मुख्य स्रोत राजस्वअन्तर्गत भन्सार महसुलको वृद्धि लक्ष्यभन्दा बढी देखिएको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्मको विवरणअनुसार भन्सार महसुल यसअवधिको लक्ष्यभन्दा १३.६७ प्रतिशतले बढेको छ ।
यसअवधिमा ५६ अर्ब ५५ करोड ९६ लाख भन्सार असुली लक्ष्य लिइएकोमा ६४ अर्ब २९ करोड २२ लाख असुली भएको छ । भन्सारअन्तर्गत पूर्वाधार कर सबैभन्दा बढी लक्ष्यभन्दा २१.८१ प्रतिशतले बढेको छ ।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको राजस्व स्थितिको समीक्षा गर्दै पैठारी भन्सार १४.५१ प्रतिशत, कृषि शुल्क ११.२ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा बढी असुली भएको जानकारी दिएको छ ।
यसअवधिमा निकासी कर यसअवधिको लक्ष्यको १३.३९ प्रतिशत र अन्य आय ६७.४४ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । माघसम्म ३ खर्ब १९ अर्ब १५ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ ।
यसअवधिमा संकलित राजस्व लक्ष्यभन्दा ६.७४ प्रतिशतले बढी हो भने वार्षिक लक्ष्यको ५६.४ प्रतिशत हो । यसअवधिमा कुल २ खर्ब ९८ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो भने वार्षिक लक्ष्य ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यगत समस्याको ठोस पहिचान गरी सुधारका रणनीतिक उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिए ।
बजारमा अनेकन समस्या देखिएको र त्यसको गुनासो बढिरहेको भन्दै उनले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालनलाई सुदृढ बनाउन र सबै क्षेत्र एक भएर लाग्न सुझाव दिए ।
यसअवधिमा भ्याट समग्रमा लक्ष्यको ९८.९१ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । माघसम्म ९० अर्ब १३ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लक्ष्य लिएकोमा ८९ अर्ब १५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ । भ्याटजस्तै स्वास्थ्य सेवाकर, शिक्षा सेवाशुल्क, अन्य कर र गैरकर पनि लक्ष्यभन्दा कम उठेको छ ।
यसअवधिमा स्वास्थ्य सेवाशुल्क ६१ करोड ४ लाख रुपैयाँ असुली गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ५४ अर्ब ७९ करोड, शिक्षा सेवाशुल्क ४७ करोड ६४ लाखको लक्ष्य रहेकोमा ४३ करोड, अन्य कर ५ अर्ब ६१ करोड ४८ लाखको लक्ष्यमा ४ अर्ब ७८ करोड र गैरकर २४ अर्ब ८८ करोड ७१ लाखको लक्ष्य रहेकोमा २४ अर्ब ८२ करोड ३७ लाख मात्र संकलन भएको छ ।
७ महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार रजिस्ट्रेसन दस्तुर लक्ष्यभन्दा सबैभन्दा बढी असुली भएको छ । रजिस्ट्रेसन लक्ष्य ८ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँको रहेकोमा लक्ष्यभन्दा ३८.५५५ प्रतिशतले बढी अर्थात् ११ अर्ब ६७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ ।
यसले चालू वर्षको ७ महिनामा घरजग्गाको कारोबार राम्रैसँग फस्टाएको देखाउँछ ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसअवधिमा आयकर लक्ष्यभन्दा ६.५४ प्रतिशत र सवारीसाधन कर ३.७१ प्रतिशतले बढेको छ ।
सवारीसाधन कर ५ अर्ब २० करोड ३२ लाख रुपैयाँ असुली गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ५ अर्ब ३९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ असुली भएको हो । आयकरमध्ये आयकर र बहालकर लक्ष्यभन्दा बढी छ भने ब्याजकर भने घटेको छ ।
समग्रमा आयकर ६४ अर्ब २६ करोड ८६ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ६८ अर्ब ४६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ असुली भएको हो ।
आयकरमध्ये आयकर नै ५५ अर्ब ९५ करोड ३० लाखको लक्ष्य रहेकोमा ६१ अर्ब २७ लाख र बहालकरको लक्ष्य १ अर्ब ८० करोड १२ लाख रहेकोमा २ अर्ब २१ करोड ७० लाख रुपैयाँ असुली भएको हो । तर, ब्याजकर भने ६ अर्ब ५१ करोड ४५ लाखको लक्ष्य रहेकोमा ५ अर्ब २४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्रै असुली भएको छ ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा. डा. पूण्यप्रसाद रेग्मीले कर्मचारीको मनोवल उच्च गराइ खोजमूलक अनुसन्धान पद्धतिको अभ्यासमार्फत करको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार तीव्र गतिमा भएको स्थितिमा राजस्व परिचालनमा समयानुकूल अभिवृद्धि हुन नसक्नु विडम्बनपूर्ण भएको बताए । “सबै कर्मचारीले नतिजा देखिने गरी आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहोस्” उनले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै भने ।
राजस्व सचिव राजन खनालले शीर्षकगत राजस्व संकलनमा देखिएको उतारचढावलाई तथ्यपरक विश्लेषण गरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महालेखा नियन्त्रक राजेन्द्रप्रसाद नेपालले सिंहदरबार क्षेत्रका विभिन्न ६४ वटा कार्यालयबाट हुने भुक्तानीलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय काठमाडौंबाट फागुन १५ देखि विद्युतीय भुक्तानी (ई–पेमेन्ट) सुरु गरेकाले करदाताहरूको कारोबार यथार्थपरक हुने दाबी गरे ।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूले आ–आफ्नो विभागको राजस्व प्रगति विवरण पेस गरेका थिए ।